Kugadziridza Firmware kubva kuLinux kunogoneka | Linux Vakapindwa muropa
Vashandisi veGNU / Linux, zvinosuwisa, hatigone kugadzirisa firmware ye Hardware yedu kubva kune yedu yekushandisa system. Iwo ma distros haasati aine mafomu eiri basa sezvo aripo muMicrosoft Windows, kubva kwaunogona kugadzirisa iyo BIOS / EFI yebhodhi reamai nenzira yakapusa.
Zvakanaka Dell, kambani yakatoshanda pamwe nekuda kwechimwe nguva, inoda kuunza kugona uku kugoverwa kweLinux futi. Uye sekureva kwaSoftPedia, uko kwave nekupararira kwemashoko, distro yekutanga yekubatsirwa neiyi nyowani mashandiro inogona kuve Fedora, kunyangwe ichizosvika kune dzimwe nzvimbo dzekuparadzira munguva pfupi inotevera.
Nhau dzakanaka, kunyange hazvo dzichiri nekusava nechokwadi kwakawanda, kubvira Dell atanga kushanda izvozvi uye pane nzira refu yekufamba, kuwedzera kune iyo iyo kambani panguva ino zvinoita sekunge ichangoipa iyo chete komputa , iyo modhi inoitirwa bhizimusi munda uye iyo IoT Dell Edge Gateway. Mugadziri anga ari mwedzi mitanhatu vachishanda mukuyedza sevhisi zvekuvandudzwa kuUFE yavo uye neavo vari kubatana nawo nemakambani akaita seRed Hat.
Richard Hughes, musimudziri weGNOME akazivisa kuti Dell ari kushanda pachinhu ichi uye kuti chazovewo chigadzirwa chekutanga chemakomputa chinogona kujoina LVFS (Linux Vendor Firmware Service)). Kune avo vasingazive, LVFS ibasa revashandisi veLinux kugadzirisa nyore nyore firmware yemakomputa avo ...
Mamwe mashoko - LVFS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Dell anoda kuunza firmware zvinyorwa kuLinux
11 yakavhurwa sosi mapurojekiti epentest